Ndị njem nlegharị anya Russia anọ hụrụ ozu ha na sauna Hotel Albanian
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Albania na -agbasa » Ndị njem nlegharị anya Russia anọ hụrụ ozu ha na sauna Hotel Albanian
Akụkọ Albania na -agbasa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ndị njem nlegharị anya Russia anọ hụrụ ozu ha na sauna Hotel Albanian.
Dị ka ụfọdụ akụkọ si kwuo, ndị njem na -ekuru ume na sauna nke ụlọ oriri na ọ dueụ dueụ n'ihi usoro ikuku na -adịghị mma.
Ndị njem nlegharị anya Russia nwụrụ na nkwari akụ ọdịda anyanwụ Albania.
Ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ nnọchi anya ụlọ ọrụ Russia na -enyocha ọnwụ nke ndị njem Russia anọ.
A hụrụ ozu ndị njem nlegharị anya Russia n'ime ụlọ oriri na ọ inụ inụ n'obodo Kerret na mpaghara ọdịda anyanwụ Albania Kavaja district.
Onye nnọchi anya ndị nnọchi anya gọọmentị Russia na Tirana, Albania kwuru na a hụrụ ozu ndị njem Russia anọ nwụrụ na sauna ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ n'obodo Kerret na mpaghara Kavaja na ọdịda anyanwụ Albania.
Ndị ọrụ nke ngalaba nnọchi anya ụlọ ọrụ nnọchi anya Russia na Albania na -enyocha nkọwa nke ọnwụ ndị njem nlegharị anya Russia.
"[Ha na -enyocha] ọnọdụ a," onye na -ekwuchitere ụlọ ọrụ mgbasa ozi kwuru.
Dị ka akwụkwọ akụkọ Albania Daily News si kwuo, a hụrụ ozu ndị njem Russia anọ nwụrụ na mbubreyo Fraịde n'ime sauna ụlọ oriri na ọ inụ hotelụ n'obodo Kerret na mpaghara Kavaja na Albanianke ọdịda anyanwụ.
Ha niile kụrụ ume, akwụkwọ akụkọ kwuru na isi ndị uwe ojii.
Karịsịa, ndị uwe ojii na -enyocha ma sistemụ ikuku dị na sauna arụ ọrụ nke ọma.
Ndị nwụrụ anwụ, ụmụ nwoke abụọ na ụmụ nwanyị abụọ, gbara afọ 31 ruo 60.